M/weyne Shariif oo dib uga laabtay Muqdisho, safar saacado ah oo uu ku yimid Puntland kadib. – Radio Daljir
M/weyne Shariif oo dib uga laabtay Muqdisho, safar saacado ah oo uu ku yimid Puntland kadib.
Garowe, Aug 28 – Abaaro 1-dii duhurnimo ee maanta ayuu ka soo dagey garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe, madaxweynaha dawladad federaalka ah ee Somaliya iyo wafti uu hogaaminayo, waxaana garoonka soo dhaweyn diiran ugu sameeyay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. C/raxmaan Sh. Maxamed Maxamuud ‘Faroole’.
Soo dhawynta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wakiilka Xoghayaha QM ee arrimaha siyaasada ee Somaaliya Amb. Mihiga, R/wasaare C/weli Maxamed Cali ‘Gaas’, M/weyne ku xigeenka Puntland Gen. C/samad Cali Shire, xubno ka tirsan golayaasha dawlada federaalka ah iyo Puntland, Issimo, aqoonyahano, iyo qeybaha kale duwan ee bulshada reer Puntland.
2-da madaxweyne ayaa salaan sharaf ka qaatey cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta ee Puntland.
Waxaa aad loo adkeeyay ammniga guud ee caasumada Puntland ee Garowe. Waxaa ilaa saakey hakad galey isu-socodka gaadiidka qeybihiisa kale duwan oo laga leexiyey laamiga dheer ee dhex mara magaalada, sababo la xiriira amaamka caasumada awgood, iyadoo fagaaraha barxada iyo dhinacyada laamiga lagu arkayey kumanaan dadweyne ah oo iyagu ku dhawaaqaya kalmado soo dhawayn ah oo ay ka mid tahay ?soo dhawoow madaxweyne?.
2-da Madaxweyne iyo madaxda kale ee safarka ku wehelisa ayaa socdaal lug ah ku marey laamiga dheer ee bartamaha magaalada Garowe, kana soo bilaabey barta loo yaqaan Xero-Inji oo ku taala dhanka bari ee magaalada, deetana ay socdaalkooda ku soo gaareen fagaaraha barxada oo ay ku sugnaayeen kumaanaan dadweyne ahi.
Socdaalkaa lugta ah dabadeed, waxaa xigey booqasho ay waftiga uu horkacayay M/weyne Shariif ay ku tageen goobo ay ka mid yihiin:
– Xeryaha dadka barakacayaasha ah,
– Cisbitalka guud ee Garowe, iyo
– Qaar ka mida xarumaha wasaaradaha Puntland iyada oo dhamaan goobaha ay booqdeen laga siiyay warbixin shaqo.
Socod dheer iyo soo dhaweyn diiran ka dib,
M/weynaha Puntland Dr. C/raxmaan Maxamed Faroole oo ka hadlay soo dhawaaynta loo sameeyay waftiga M/weynaha Shariif iyo socdka lugta ah ee ay ku mareen magaalada dhexdiidu uu astaan u yahay martigelinta shacabka reer Puntland, iyo dareenka Somalinimo ee shacabka Puntland.
Madaxweynaha dawlada federaalka ah Shariif Sh. Axmed ayaa dhankiisa qirey in Puntaland ay tahay udub-dhexaadka umada Soomaaliyeed, isla markaana lagu xasuusto shacabka reer Puntland in ay yihiin aasaasayaashii dawlada federaalka ah.
Amb. Mahiga oo ka hadlay safarka M/weyne Shariif ee Puntlanf ayaa sheegay in ay maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed, kana tarjumaysa hoggaakna iyo siyaasada labada hoggaamiye.
M/weyne Shariif ayaa dib ugu laabtey Muqdisho isla maanta, waama markii ugu horeysey oo uu Puntland yimaado tan iyo markii loo doortey xilka madaxweynaha dawlada federaalka ah bishii Janaayo ee sanadkii 2009-ka.